Nge tachycardia izikhathi eziningi empilweni yami wabhekana yilowo nalowo phakathi kwethu. Nakubukwa jikelele, umbuzo ukuthi tachycardia, ungaphendulwa singalendlela: kuba ophilisayo obonakalayo of ukushaya kwenhliziyo - ezingaphezu kuka-90 ngomzuzu (evamile kunikezwa abadala nezingane abaneminyaka engaphezu kuka-7). Kungaba kumelwe kugujwe, ikakhulukazi olwandle esindayo: ngakho bayazesaba lutho, abaningi baye baphawula ngokushesha kangakanani, ngokwezwi nezwi okusho "waphefumula kanzima", kwangathi beat inhliziyo. Lolu hlobo is njengoba tachycardia neurogenic eyaziwa - ubendle sezinzwa abonakala abantu ephelele.
Heartbeat ophilisayo futhi ngesikhathi umsebenzi ngokomzimba noma ezemidlalo, nokuhamba okusheshayo, ekukhuphukeni noma izitebhisi. Kulokhu, impendulo yombuzo othi, yini tachycardia, imi kanje: kuwumbandela zemvelo ngokuphelele kubangelwa ukwanda isidingo samanzi emzimbeni ukuze umoya-mpilo. Ukuhlinzeka lemali edingekile yalo, inhliziyo iqala ukumpompa igazi nzima futhi, ngokufanelekile, ukuphefumula encishisiwe ophilisayo. Azikho izinguquko ohlelweni senhliziyo kungukuthi uyalandelwa. Lokhu tachycardia akuyona ingozi emzimbeni, kodwa kufanele namanje ukuqapha inhliziyo yakho ishaya ngamandla phakathi ukuqeqeshwa ngokomzimba ukuze kuvinjelwe sindisa.
tachycardia bokuphila kubonakala kwezinye izimo - isibonelo, uma umuntu ehlezi noma ulele evele uyasukuma igxume, ukuthatha ime mpo (okubizwa ngokuthi tachycardia orthostatic). Ngaphezu kwalokho, palpitations reception kungadalwa imithi ethile (i-hormone, corticosteroids, ama-ejenti zenhliziyo), futhi kungaba ngenxa lokushisa lomzimba okusezingeni eliphezulu. Njengoba zibizwa ngokuthi ama ikhono yini ikhofi noma itiye eqinile ukwandisa izinga inhliziyo ngenxa okuqukethwe kwabo caffeine. Tachycardia kubangelwa izizathu ebhalwe ngasenhla, ibizwa ngokuthi itheku noma sine - kwenhliziyo ukusikeka uma sinikezwa okuthiwa itheku node, ise-ATRIUM kwesokudla. Semfene emsebenzini wakhe yena, kungabuye kubangelwa ezihlukahlukene extracardiac ( "extracardiac") uthi futhi pathologies: thyrotoxicosis, neurosis, izifo ezithathelwanayo.
Labo banesithakazelo kulokho tachycardia, kufanele bazazi futhi ezahlukeneyo zalo sokugembula. umehluko ngokuyinhloko kusukela tachycardia bokuphila ukuthi zivela hhayi ngesikhathi umsebenzi noma injabulo kuphela, kodwa futhi lapho esephumule, lapho umuntu ingasebenzi noma iyiphi inhlangano esebenzayo futhi neze siyabhubha. Umthombo isigqi ngesikhathi esifanayo iphelelwe engeyokuqala itheku - ezihlukahlukene ngokuthi tachycardia noma paroxysmal ethunjini, egcizelela paroxysmal yaso ngokwemvelo.
Kuye umthombo ishayela ukuhlukanisa ventricular futhi tachycardia supraventricular, paroxysmal. Isifo senhliziyo zivamise ukwenzeka ngokuzumayo, ngaphandle kwesizathu, futhi nje ngokuzumayo ayeke. isikhathi sabo zingahluka. Kwenhliziyo ngesikhathi kuhlaselwa lingafika ku-170 (ventricular tachycardia) , ngisho kuze kube 230 ngomzuzu (SVT). Kulolu hlu ingenye ubufakazi engaqondile okuvumela ukuhlukanisa ifomu idatha lesi sifo. Sokugembula kungenzeka tachycardia sine - kulesi simo, kuba umphumela ukungasebenzi engeyokuqala itheku, asathuthuka e-zangokwasemuva zezinhlelo organic isifo senhliziyo. Lapho-ke, ventricular ngokungafani namafomu supraventricular kwenhliziyo isigqi kokujwayelekile kancane kancane ngemva njalo.
Izimbangela paroxysmal tachycardia baqamekela izifo ezihlukahlukene inhliziyo futhi pathologies - lezi zihlanganisa, isibonelo, azalwa naso futhi wathola isifo senhliziyo, ukulimala imisipha yenhliziyo (myocarditis), njll Ngenjongo ukwelashwa okufanele ka tachycardia kuyadingeka azokuqhubela ahlolwe kahle emzimbeni wesiguli, kuhlanganise ECG .. Inhliziyo ultrasound nabanye - ngeseluleko udokotela. Lezi zinyathelo kuyosisiza ukusungula uhlobo esiqondile tachycardia futhi izizathu zokushaywa kwalo.
Ngakho, impendulo yokugcina yombuzo kuyini tachycardia, kungenziwa zavela ngale ndlela: uphawu ukuziba ukuthi kunoma yisiphi isimo akudingekile, njengoba kungase kube ngenxa yokugula kakhulu. Uma palpitations ukukuhlupha ngokuvamile, kudingeka libheke wenhliziyo.
Warts Ikhaya Ukwelashwa
Indlela esiphatha ngayo warts ukulengiswa?
Kungani nokubhamuka amaqanda ebolile
I 10 amabhayisikobho engcono. Qala ukubuka i-movie KinoGo
Magpie - inyoni ndima noma cha? Magpie: incazelo, yokuphila
Zokugcina Underground unyaka wonke: design, ukuthuthukiswa ubuchwepheshe
Land Rover Discovery 4. Izici Uhlolojikelele
"Ngiyesaba ukuya wezifo zabesifazane": indlela esingasiza ngayo kulesi simo
Umqambi Sergei Taneyev: Biography, lokusungula
Beautiful actress Brazilian (ifotho)
Indlela elula ukugcina parsley ebusika
Pokemon Dratini: incazelo, ukuziphendukela kwemvelo, spsobnosti